नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। पृष्ठभूमिमा ‘बिग बोस’कै ढाँचाको एक आँखे प्रवेशद्वार । सम्मुखमा मञ्च । मञ्चमा छरिएको रंगबिरंगी प्रकाश-पुञ्ज । भित्ताको त्यही आँखाबाट फुत्त प्रकट हुन्छिन्, एक अर्धनग्न युवती । गीतसँगै उनको शरीर यन्त्रवत चलमलाउन थाल्छ । गीतको ध्वनि क्रमशः चर्को बन्छ-
‘याई रे याई रे जोर लगाके नाचे रे
चल मेरा संग संग, लेले दुनियाँ के रंग
होजा रंगीला रे ….।’
रंगीन रातमा बेपर्वाह रमाउन आउनेहरुको भीडले ठमेललाई मादक बनाउँछ । दोहोरी साँझ, डिस्को थेक, डान्स बारदेखि रात्री क्लबहरु आगन्तुकको फर्माइस पूरा गर्न जाग्राम बस्छन् ।
हुक्काको धुँवा र मदिरा मिश्रित गन्धले त्यहाँको माहौललाई अरु मादक बनाउँदैछ । मञ्चमा ठडिएको पिलरमा समातेर ती नर्तकी ‘पोल डान्सर’कै हाउभाउमा प्रस्तुत हुन्छिन् । मञ्चतर्फ फर्काएर ठाउँ-ठाउँमा सोफा राखिएको छ, जहाँ तन्नेरीहरु रसिक मुडमा बसेका छन् । गीतको भाका हाल्दै उनीहरु पनि बसीबसी नाच्छन् । उनीहरुको अघिल्तिर काँचको टेबलमा मदिरा, हुक्कासँगै पैसाको थाक छ । नर्तकी जति-जति कामुक भावभंगीमा पेश हुन्छिन्, उत्तिउत्ति मञ्चमा पैसाको वर्षा हुन्छ ।
एक पुरुष सोफाबाट नाच्दै उठ्छन् । नर्तकीलाई आफूनजिक आउन ईशारा गर्छन् । नर्तकीको हातमा समाएर केही क्षण नाच्छन् । त्यसपछि टेबलका केही पैसा नर्तकीको टाउकोमा घुमाएर हुर्‍याउँछन् । उनका साथीहरु जोडले हुटिङ गर्छन् ।
त्यसैको समानान्तर सोफामा दुई जोडी युवायुवती रमाइरहेका छन् । त्यसमध्ये छोटो वानपिस लगाएकी युवती बेपर्वाह पैसा उडाइरहेकी छन् । टेबलको मदिरा, हुक्का र स्न्याक्स छाडेर उनी नाच्न तम्सिएकी छन् । घरीघरी मञ्चमा उक्लन समेत खोज्छिन् । तर, उनको खुट्टा लर्बराउँछ । मञ्चमा नाचिरहेका पुरुषलाई बोलाउँछिन् । केही क्षण विन्दास पारामा नाच्छिन् । अनि उमंगमय भावमा पैसा हुर्‍याउँछिन् ।
‘दाइ, हामी पनि त्यहाँ बसौं ?’ फिटिङ्स जिन्स र टिसर्ट लगाएकी, अनुहारमा बढी नै मेकअप गरेकी, अन्दाजी २२-२५ वर्षकी युवती विनम्रताका साथ सोध्छिन् । एक भुक्तभोगी साथी कानेखुसी गर्छन्, ‘यिनीहरुलाई यहाँ बस्न दियो भने वियर र हुक्का खाएरै गोजी रित्याइदिन्छन् ।’ ती युवती जोर-जबर्जस्ती गर्दिनन् । खिन्न हुँदै बारतर्फ गएर साथीहरुसँग छिल्लिन थाल्छिन् ।
दर्जन जति सोफा र क्याबिन राखिएका छन् । तर, त्यहाँ ग्राहकभन्दा बढी स्टाफ छन् । वेटरहरु कालो र सेतो सर्टमा तैनाथ छन् । आधा दर्जन हाराहारी युवती स्कर्ट, वानपिस र फिटिङ जिन्समा ठाँटिएर ग्राहकको ‘स्वागत’ गरिरहेका छन् । युवा-युवतीको अर्को जत्था छ, जो रसिला हाउभावमा रंगीला नृत्य देखाइरहेका छन् ।
चित्त बुझे बस्नु
ठमेलको ज्याठा मार्ग छाडेर सोझै अगाडि बढेपछि भगवतीस्थान पुगिन्छ । रात जति छिप्पिँदै जान्छ, त्यहाँको घनत्व बढ्दै जान्छ । सर्वाधिक चर्चित रात्री क्लब एलओडी (लर्ड अफ ड्रिङ्क्स) त्यहीं छ, जहाँसम्म थरीथरी तन्नेरीका लस्कर लागेको छ ।
सडकको एक छेउमा एक युवती छिन् । हाई हिल, गाढा रातो स्कर्ट, सुनौलो अनि चहकिलो रंगको टिसर्टमा ठाँटिएर सानो ह्याण्ड ब्याग झुण्ड्याएकी उनी त्यहाँ यसरी उभिएकी छन्, मानौं उनी फोटोका लागि पोज दिइरहेकी मोडल हुन् । एकदमै होसियारीसाथ अनि धैर्यतापूर्वक उभिएकी उनको अनुहार सडकबत्तीको उज्यालोमा चम्किएको छ ।
एक अधवैंशे पुरुष सरासर उनी नजिक पुग्छन् र केही क्षण कुराकानी गर्छन् । पुरुष त्यहाँबाट हिँड्छन्, युवती उनको पछि लाग्छिन् ।
‘आउनु न, आउनु । एकपटक भित्र पसेर हेर्नुहोस्’ साँघुरो अनि केही अध्याँरो ढोकातर्फ इंगित गर्दै एक युवा अफर गर्छन्, ‘चित्त बुझे बस्नु, नभए फर्कंदा हुन्छ ।’
‘भित्र के छ र ?’ हामी बुझ पचाउँदै सोध्छौं । ‘जे जे चाहिन्छ, सबै छ’ ती युवा निर्धक्क कूटनीतिक जवाफ फर्काउँछन् । साँघुरो र पर्याप्त उज्यालो नपुगेको बाटो छिचोल्दै अगाडि बढेपछि आकर्षक ढोका देखापर्छ । त्यहाँ एक सुरक्षा गार्ड उभिएका छन्, जो निकै फूर्तिका साथ हतार-हतार ढोका खोल्न तम्सिन्छन् ।
भित्र उसैगरी सोफाहरु सजाइएका छन् । अघिल्तिर मञ्च छ । तर, त्यहाँ कुनै नाचगान छैन । न कुनै ग्राहक नै । बरु आधा दर्जन जति युवती आ-आफ्नै धुनमा मग्न छन् । कोही मोबाइल चलाइरहेका छन्, कोही चुरोटको धुँवा उडाइरहेका छन् त कोही आपसमा गफिँदैछन् ।
नयाँ आगन्तुक देख्नासाथ उनीहरु हार्दिकताका साथ यसरी घेरा हाल्छन् मानौं, आगन्तुक रानो मौरी हुन् । ‘के खाने दाइ, के सेवा गरौं ?’ अलि डल्ली र पूरै कपाल रंगाएकी युवती मुखै जोड्न खोज्दै सोध्छिन् ।
‘खै खानेकुरा के-के छ, मेनु हेरौं न ।’
‘मेनु के हेर्नु, आफूलाई के खान मन लागेको हो भन्नु न । जे पनि पाइन्छ’ उनै युवती अलि ठुस्किएको भावमा भन्छिन् ।
त्यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा उनीहरु रिसाए झैं देखिन्छन् । बाहिर ती युवा अरु ग्राहकलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन्, ‘एकचोटि त पसेर हेर्नुहोस् न । मन लागे बस्नु ।’
कर्मचारी सञ्चय कोषको भवनबाट मोडिएर ज्याठा मार्ग जानेतर्फको सडकपेटीमा दुई महिला पछ्यौरा ओढेर आपसमा भलाकुसारी गरिरहेका छन् । अघिल्तिर दुईवटा ठूलो थर्मस र केही प्लाष्टिकका गिलास छन् । झोलामा केही थान चुरोट र पराग । ‘चिया खानु, चिया’ नजिकै पुगेपछि एक महिला आग्रह गर्छिन् ।
ए …समात् समात्
‘ए समात् समात्’ नर्सिङ चोकमा अचानक हो-हल्ला हुन्छ । प्रहरीले एक युवाको कठालो समातेका छन् । ती युवा बलजफ्ती फुत्कन खोज्दैछन् । अरु दुई महिला र पुरुष प्रहरी दौडिँदै आइपुग्छन् । पुरुष फुत्किएर दौडन्छ । महिला प्रहरीले लखेट्दै केही परसम्म पुर्‍याउँछिन् ।
एकछिन त्यहाँ रमिता हुन्छ ।
‘के भएको सर ?’
‘रक्सीको बोतल बोकेर हिँड्छ’ प्रहरी सुनाउँछन्, ‘त्यसरी रक्सी खाँदै हिँड्न मिल्दैन भनेको..।’
‘अनि पिट्नुभो त ?’
‘बोतल नबोक भन्दा जथाभावी मुख छाड्यो क्या’ प्रहरी भन्छन्, ‘त्यही भएर समातेको ।’
महानगरको रात्रिजीवनमा दुई कुरा अनिवार्य देखिन्छ, सुरा र संगीत । गजल, लोकदोहोरीसँगै रक, ज्याज, ब्लुज, हेभी मेटलको फ्युजन संगीत । थरीथरीका मदिरा र हुक्काको धुँवामा मग्न तन्नेरीहरु ।
रात ढल्दै जाँदा ठमेलको मादकता बढ्दै जान्छ । हुलका हुल तन्नेरीहरु ओहोरदोहोर गर्छन् । छिल्लिन्छन्, सडक बत्तीको उज्यालोबाट छलिएर कानेखुसी गर्छन् ।
‘राति सधैं क्लब जाने, मदिरा खानेहरुले सधैं यसरी लफडा गर्छन् ?’ हामी सोध्छौं ।
‘होइन, गर्दैन-गर्दैन’ प्रहरी भन्छन्, ‘त्यस्तो लफडा भएको छैन । आज त्यो फुच्चेले बोतल बोकेर रक्सी खाँदै हिँडेकाले कन्ट्रोल गर्न खोजेका हौं ।’
‘भनेपछि काठमाडौंको रात्री जीवन शान्त नै छ है ?’
‘हजुर ठीक छ, ठीक छ । त्यस्तो लफडा केही छैन ।’
घडीको काँटाले फन्को लगाएसँगै ठमेलले आफ्नो रुपरंग बदल्छ । यहाँ दिन र रातको रंग अलग हुन्छ । ध्वनि अलग हुन्छ । र, सुगन्ध/गन्ध अलग हुन्छ ।
चन्द्रागिरिको डाँडाबाट घाम ओझेल परेसँगै हावामा लहराइरहेका रंगबिरंगी ‘लुङ्दर’, ‘ओम मणि पद्मे’को विद्युतीय ध्वनि र सुनपाती धुपको सुगन्धले ठमेललाई आध्यात्मिक शहरझैं बनाइदिन्छ । तर, जति-जति रात छिप्पिँदै जान्छ, ठमेल तामासिक बन्दै जान्छ । गजल र लोकदोहोरीको भाकासँगै ज्याज, मेटल, रक र ब्लुजको चर्को ध्वनि । मदिरा र हुक्काको मिश्रित गन्ध । अनि सबैतिर छरिएको चहकिलो र रंगबिरंगी उज्यालो ।
यस्तै रंगीन रातमा बेपर्वाह रमाउन आउनेहरुको भीडले ठमेललाई मादक बनाउँछ । दोहोरी साँझ, डिस्को थेक, डान्स बारदेखि रात्री क्लब आगन्तुकहरुको फर्माइस पूरा गर्न हरदम जाग्राम रहन्छन् ।
महानगरको रात्रिजीवनमा रमाउन को आउँछन् ? शहरिया किशोर-किशोरी ? पैसावाल तन्नेरी ? धनाढ्यका सन्तान ? व्यापारी ?
एक भुक्तभोगी सुनाउँछन्, ‘सबैखाले हुन्छन् । तर, धेरैजसो चाहिं ३०-४० उमेरका वयस्क देखिन्छन् ।’ धेरैजसो बेलामौकामा मात्र यो खर्चिलो रात साट्न आइपुग्छन् । खासगरी सप्ताहन्तमा । केही भने नियमित रुपमै रात्री जीवनमा हेलिन रुचाउँछन् ।
‘एलओडीमा एउटै टेबलको, एक रातमा दुई-तीन लाख तिर्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘कुनै रात त्यो टेबल खाली हुँदैन । एक रातमै लाखौं उडाउँछन् ।’
चिया खानु, चिया
कर्मचारी सञ्चय कोषको भवनबाट मोडिएर ज्याठा मार्ग जानेतर्फको सडकपेटीमा दुई महिला पछ्यौरा ओढेर आपसमा भलाकुसारी गरिरहेका छन् । अघिल्तिर दुईवटा ठूलो थर्मस र केही प्लाष्टिकका गिलास छन् । झोलामा केही थान चुरोट र पराग ।
‘चिया खानु, चिया’ नजिकै पुगेपछि एक महिला आग्रह गर्छिन् ।
‘कति हो एक कप चियाको ?’
‘..खै कति ?’ उनी आफैं अलमलमा परिन्, ‘२५ होला, दूध चियाको ।’
‘आफैंले बेच्ने चियाको मूल्य पनि थाहा हुन्न र ?’
‘आज पहिलो चोटि आएका’ अर्की महिला बोल्छिन्, ‘अहिलेसम्म एक कप पनि बिक्री भएको छैन ।’
उनी रामेछापकी हुन् । जमलमा एउटा कोठा भाडामा लिएकी रहिछन् । अर्की महिला उनीभन्दा केही प्रौढ छिन् । उनी डोल्पाकी । पेट दुख्ने समस्या लिएर उपचार खोज्दै काठमाडौं आएकी रहिछन्, श्रीमान र दुई बच्चासहित । उपचार खर्च जुटाउन श्रीमान भारी बोक्न थाले । जमलमा एउटा कोठा लिएर उनी बालबच्चा स्यहार्न थालिन् । यी दुई दिदीबहिनी त्यही डेरामा आमने-सामने बस्छन् ।
‘पढेको छैन, केही काम जानेको छैन’ ती महिला सुनाउँछिन्, ‘त्यही भएर आज चिया बेच्न यहाँ आयौं ।’ तर, चिया बिक्री हुने हो वा होइन ? रातभर बसेर चिया बेच्न पाइने हो वा होइन ? उनीहरु अलमलमा थिए ।
‘अघि प्रहरीले यहाँ बस्न पाइँदैन भन्दै थियो’ उनीहरुले सुनाए, ‘कहाँ बस्न पाइन्छ त भनेर सोधेको ‘जतासुकै बस’ भन्छ । के भनेको होला ?’
दुई थर्मस चिया बेच्नका लागि उनीहरु तातो ओछ्यान छाडेर, निद्रा माया मारेर रातभर बस्न तयार छन् । तर, प्रतिपल मात्तिँदै गएको शहरमा चियाका अम्मली कति होलान् ?
रात एक्लो छैन
जब सिंगो शहर निदाउने तरखरमा हुन्छ, मध्य शहरका दरबारमार्ग र ठमेल भने जागा रहन्छन् । यी यस्ता गन्तव्य हुन्, जहाँ रात्रिजीवनको अनुभव साट्नेहरुको जमघट हुन्छ । लोकदोहोरी, गजल रेष्टुरेन्टदेखि डिस्को थेक अनि रात्री क्लबहरुले यहाँ निदाउन दिँदैनन् ।
गजलको मधुर संगीतमा रमाउँदै पारिवारिक जमघट गर्ने कि डिस्कोमा गएर साथीसंगीसँग मस्त नाच्ने ? मर्जी आ-आफ्नै । दुई बजेसम्म अर्थात् पूरा रात त्यहाँ मनोरञ्जन लिन सकिन्छ । कोभिडको बखत सुस्ताएको रात्री जीवन अहिले भने क्रमशः ब्युँझिएको छ । रात्रिकालीन सेवाका लागि नयाँ-नयाँ रेष्टुराँ, क्लब खुल्ने क्रम शुरु भएको छ ।